Ukulawulwa Kwekhwalithi - IMBONI YOKUPHUQA IMBONI
Inqubo Yokuhlola kaDeye ukulawula ikhwalithi ye-valve
-Casting ngibheka. Ithimba le-QC lizohlola ukusakaza into ngento kusuka ekubukekeni, ukujiya kodonga, ubungako, usayizi kanye nombiko wokuqala wezinto ezivela kusisekelo ngokuya ngamazinga wamazwe omhlaba ukugwema lawo angafanelekile.
-Machining wokuhlola. Ngalesi sikhathi, ithimba le-QC lizohlola ukunemba kwemishini, ubukhulu bobuso nobuso, imishini ye-flange ukuthola izinkinga ezingaba khona ngokushesha okukhulu.
-Ukuhlola ukuhlangana. Ngemuva komhlangano, i-QC izokwenza ukuhlolwa okuphelele ku-valve. Ukuhlola okubonakalayo kufaka hlanzeka ikamelo langaphakathi, ukubukeka okukhanyayo nokuhlanzekile, nokumaka okucacile emzimbeni. Ukuhlolwa kobukhulu kuqukethe ubukhulu bobuso nobuso, ubukhulu obucayi bokuphela kokuxhuma. Ukuhlolwa kwengcindezi kufaka ukuhlolwa kwe-hydrostatic kokufakwa uphawu nokuhlolwa komzimba nomoya ekuvalweni.
-Dimension Ukuhlola: I-QC izovivinya imishini ye-flange ngokuqinile njenge-ANSI B 16.5 Noma enye imfuneko ejwayelekile. Ubuso ubuso nobuso buqinile ngokwe-ANSI B 16.10 noma elinye izinga elidingekayo.
Ukuphakama kwama-valve nobukhulu bamasondo esandla njengokuya ngemidwebo yobuchwepheshe okuvunyelwene ngayo ngenkontileka.
-Hydraulic Test nomoya Test. I-QC izovivinya ukuvuza kwezimpawu, isihlalo sangemuva neShell ngokuqinile ngokwe-API598 noma i-EN1226 noma elinye izinga okuvunyelwene ngalo ngenkontileka. Inqubo ijwayelekile futhi kubikwa imiphumela yokuphumula.
-Ukupenda Nokupakisha. Umbala wokudweba nomphumela wokufafaza uzohlolwa. I-QC izoqinisekisa ukuthi ukupakisha kungokwesicelo ngasinye senkontileka. I-valve ehlanzekile ibekwe ngokuhlelekile ebhokisini eliqinile lokhuni elinophawu lokuthumela olucacile ngokugcwalisa izinto ezithambile ezanele ukugwema ukushayisana.
-Imibiko. Ngemuva kokuhlolwa, uzothola umbiko oningiliziwe kusuka ezingxenyeni zokulingisa ubheke kwimikhiqizo eqediwe ngaphambi kokuthunyelwa. Imininingwane yokuhlolwa kweHydraulic nemininingwane yokuhlolwa komoya enezithombe nevidiyo izokhombisa amakhasimende ukuthola isiqinisekiso ngaphambi kokuthunyelwa.
Iminyaka yokuhlangenwe nakho okukhipha i-valve nokuthuthuka okuqhubekayo, i-DEYE Quality Control System izoqhubeka nokusebenza kanzima futhi iphelele.